About Us - Ningbo YINZHOU DONGAO DIE mandatsaka CO., LTD
Koa satria rehefa naorina tamin'ny taona 2006, ny orinasa efa manokana ao amin'ny R & D sy ny orinasa mpamokatra entana ny aluminium firaka ary ny zinc firaka vokatra. Company no misy in Yinzhou distrika, tanàna Ningbo, faritanin'i Zhejiang. Nandrakotra ny faritra tokony ho 13.500 metatra toradroa, ny fananganana faritra tokony ho 10.000 metatra toradroa.
Manana 7 vondrona ny 160T mba 800T mangatsiaka efi-trano ho faty nanarato milina, ary 3 vondrona ny 50T mba 168T mafana efi-trano ho faty nanarato teny milina. Mihoatra ny 20 ny machining vondrona foibe sy ny CNC lathes, 2sets ny ultrasonic fanadiovana andalana. Vovoka iray coating pamokarana. Mihoatra ny 50sets ny milina isan-karazany fitaovana fanodinana. Toy ny milina ary atsofony, nitifitra vary main'ny rivotra milina, Nikosokosoka milina, hovitrovitra fikosoham-bary sy ny sisa. Izahay koa ny karazana zavamaneno nandroso fitsirihana, toy ny CMM, spectrometer, ary fitaovana fandrefesana pneumatic sns
Ny vokatra dia naondrana any Eoropa sy Amerika Avaratra. Indrindra fitaovana ampiasaina amin'ny orinasa, fiara, fitsaboana saha sy aerospace faritra seranam-piaramanidina. Maro amin'ireo mpanjifa no OEM.
Nandritra ny taona maro, ny foto-kevitra ny ho commited mba hanomezana mifaninana vokatra sy ny tolotra amin'ny mpanjifa no orinasa asa fitoriana, ary "tsy fivadihana, Fanavaozana, Professional, Win-fandresena" dia fototry ny soatoavina. Miantehitra siantifika, teknolojika zava-baovao, ary mety tap ny anatiny, mavitrika hanitatra ny tsena, hampitombo ny vokatra vaovao. Taorian'ny taona maro ny ezaka, ny orinasa efa nahazo ny fankatoavana ny maro malaza ao an-toerana sy tany ivelany orinasa. Noho izany, ny orinasa azo mandroso hatrany, salama tsara ary stably.